Umzimba obuthathaka ngumqondiso wokubonakala kwe-thrush. Kwaye akukho siqinisekiso sokuba akayi kubukeka kuwe. Kodwa uyazi-wonke umntu unokuzikhusela kuyo! Ngoko, thrush: izizathu, iimpawu, unyango - isihloko "esigulayo" kubafazi abaninzi. Xoxa?
Iingqungquthela zibonisa ukuba: i-75% yamajaji athandwayo adibana ne-candidiasis yama-vaginal (milkwoman) ubuncinane kanye kanye ebomini babo, kwaye ngo-40-45% wabo, iqala kwakhona emva kwexesha. Ukuthintela oku kungenzeki, kufuneka uqinise umzimba, kuba xa i-immune system iyancipha, i-thrush iyazikhumbuza ngokukhawuleza. kuyimfuneko yokutya ngokufanelekileyo kwaye, ngokuqinisekileyo, ugweme konke okunceda abafakiweyo befungi-abaviwa ukuba bathathe ingcambu kwisini.
I-microflora yengokwemvelo yowesiswini i-95% yenziwe i-lactobacilli, ivelisa i-lactic acid-into ekhuselayo yokukhusela i-fungi ebangela i-thrush. Baqala ukwandisa ngokukhawuleza xa inani le-lactobacilli linciphisa. Oku kwenzekayo xa uthatha i-antibiotics, i-contraceptives kunye nezinye iziyobisi, usebenzisa i-intrauterine device, izifo ezithile nezifo, ngokutshintshwa kwinqanaba le-hormone echaphazelekayo nokukhulelwa.
Izinto ezinobungozi zibandakanya i-douching rhoqo kunye ne-vaginal douches, iibhafu zokutshisa, i-alkaline (i-foaming ephezulu) iimveliso zokuhlambulula umntu, i-addiction kwi-underwear-fit fit underwear and trousers under which body "does not breathe" (ubukho be-oksijini kummandla wesimo sangasese, ).
Uyakuthanda umnandi kunye nomgubo? Yeka uthando! Okokuqala, inobungozi kwinqeni, kwaye okwesibini, ishukela iyimidiya enomdla oyithandayo kwi-pathogen ye-thrush. Ngaba uziva unqwenela ukuthumela iswidi kwi-your mouth? Lungisa indlela yakho: hamba ukuya ekhitshini, kodwa ekwibumbi! Iingcali zikholelwa ukuba ukugqithisa komzimba kungenye yezinto ezinobungozi bokutshatyalaliswa kwezinto, kwaye umsebenzi wesondo uyindlela enqabileyo yokukhusela!
Saqaphela ukuba emva kobusuku obunzima, ihlabathi elijikelezayo liqala ukukhanyisa ngemibala eqaqambileyo, kunye namaqanda othosiweyo akhonkqiswa kwintlanzi eyintandokazi, kubonakala isona sidlo esikhulu. Inceba kuphela kukuba akazange acinge ukwakha isaladi elula - ukungabikho kwamavithamini kumzimba wesetyhini kunomdla kwi-candidiasis!
Gcwalisa isidingo samavithamini kwi-pharmacy complexes kwaye uphuze iikomityi ze-yezhenka, i-kefir okanye i-yogurt imihla ngemihla. Imveliso yobisi yobuninzi iyakunceda ukuphepha ukhuhlane lwe-intestinal dysbiosis. Kwaye kukho kuyo izizathu ezininzi zokuvela kwe-thrush ezifihliweyo. Kwimvelaphi yayo ye-thrush kulula ukuphuhlisa. Oogqirha bachaza oku ngento yokuba emzimbeni konke kudibaniselwano: xa iibhaktheriya zingekho kwi-digestive system, i-microflora ye-vaginal ingatshintsha lula.
"UKUFUMA I-SOAP YE-ANTIBACTERIAL: ikhuthaza ukukhula kwe-fungal infection. Umbala, ngefrikhi eqinileyo, ayilungele ukucoceka kobuqu. Nika ukhetho lwesepha, okanye i-gel engcono kwiindawo ezithandanayo.
UNGAKUTHI UTHETHE UKUPHATHA, NGAPHAMBI KWENKQUBO YOKUBHALA. I-foam, i-shampoo, izithako ezivumbayo zivutha i-mucosa evukile.
»SEBENZISA IPHEPHA YOKUHLAWULWA YEMPILO EQHUBILEYO yomgangatho ofanelekileyo. I-Grey nekhuni inokulimaza iindawo ezithintekayo, kunye nembala kunye nokunqongophala kwamakha okunciphisa umonakalo.
»KUFANELE UKUHLAWULWA KWI-COTTON, kunye ne-pantyhose - nge-gusset eyenziwe kwindwangu yendalo.
"UKUKHUMBULA ABANTU ABANYE ABAKHULU NABAKHULU. Ukuthatha umhlalaphantsi ukutsala ngaphantsi kweengubo zamashishini.
"UNGAKUTHI UTHETHE IZINTO ZEMPILO NGOKWENZA. Ngokomzekelo, ukukhawulezisa ukubuyiswa kokubanda. Asebenzi iintsholongwane, kodwa zibangele i-dysbacteriosis, apho i-microflora eqhelekileyo iyabhubha, kwaye indawo yayo kwindawo yesisu ihlala ihlala ngumngcwabo obangela i-thrush.
Abaninzi bakholelwa ukuba i-thrush yiyona nkinga yowesifazane. Akunandaba nokuba kunjalo! Ukunyangwa ngolu hlobo luyimfuneko kunye kunye neqabane (emva kokusuka kwi-thrush nayiphi na umntu akaqinisekanga, kuphela igama kuye okanye "elinye i-candidiasis balanoposthitis"). Igama lezonyango leentlobo zezilwanyana ze-thrush "yi-candidal vulvovaginitis". Kwaye esi sifo, kukho iziganeko ezimbini.
Yonke into iya kudlula ngaphandle kweyeza, iimpawu ziya kutshabalala, kodwa emva kokuqala kwesimo okanye ngaphantsi kweempembelelo zenye into eyenzayo, i-thrush iya kubuyela kwakhona. Ukuze ungayi kujikeleza kwisangqa, khawuleza uhlawule ukutyelela kwi-gynecologist uqale unyango.
I-Thrush ixhomekeke ngokusemthethweni kwizitho zangasese: ngaphambi kokuba ifilimu emhlophe iguqule, iyancipha, iyomile. Ukuqhekeza kwi-membrane yelungu lomfazi, kuya kushiya emva kweempawu, ukutyumba kunye nesilonda. Ukubetha kuya kuba nzima, kunokubuhlungu, ngokwesondo kuya kuba novuyo. Akukho sizathu sokuba e-United States i-milkwoman ibizwa ngokuba ngumtshabalali wobomi bentsapho. Phuma omnye - khawuleza ugqirha kunye nodade wakho othandekayo: kufuneka ulahle imvubelo yodwa. Amakholoni e-fungal ahlala emathangeni e-foreskin, kunye noqhagamshelwano ngalunye ngesondo, ukwandisa inkqubo yokuvuvukala kwisini, kunye nesidoda-isistim esihle kakhulu sesondlo kubo.
Ngendlela, ukuba unyango oluhlanganyelweyo, ama-creams kunye neepilisi zilungele. Ukuba iqabane aliyidingi unyango, ungasebenzisa amakhandlela okanye, kwiimeko ezinqabileyo, ukulingana.
INQUNUNU - unyango lwesini kunye nesisombululo samacwecwe e-effervescent "Levorin", i-borax kunye ne-glycerin, ngamanye amaxesha i-aniline idayi, umzekelo we-methylene eluhlaza.
Enye indlela yinto engabizi.
Unqwenela ukungabandakanyeka ekuthandeleni, njengoko oku kukukhokelela ekususeni i-lactobacilli ezuzayo ukusuka kwisini. Ukongezelela, lide kwaye likhululekile. Kwaye akukho siqinisekiso sokuba uza kuphiliswa okokuqala.
IINKCWADI, I-CAPSULES- "Flucostat", "Miconazole", "iDiflucan", "Macmirror", njl.
Iinkonzo - ngokukhawuleza, ezichanekileyo, ezifanelekileyo kunye nezanamhlanje. Ukuze unyango lwe-thrush kwiimeko ezininzi, i-capsule enye yanele: iginyiweyo-kwaye akukho tshintsho!
I-Cons - lezi yobisi ayinancinci, iphinda iwathathe ngaphakathi, ngenxa yoko isibindi kunye neentso kufuneka zisebenze ngokunyuka kwengcinezelo. Kwinkqubo yokonyango, ukuqonda ingcamango ngamanye amaxesha kuphazamiseka kwaye kukho ukuvakalelwa emlonyeni, nangona ezi zinto zihamba ngokukhawuleza.
I-CANDLES, AMAMAZI NAMADAMU nge-levorin, i-nistatin, i-clotrimazole, i-mycosolone kunye nezinye izinto ezisebenzayo.
Iziphumo - umphumo okhawulezayo kunye onokwethenjelwa: amanye amayeza asekuhlaleni esitsha aphiliswa ngentshitshi ngosuku, ezinye - iintsuku ezingama-3-6.
I-Cons - ukwenzela ukuqinisekisa ukubuyiswa okupheleleyo, inkqubo yokonyango kufuneka yenziwe kabini. Umgaqo osebenzayo - i-antibiotic ye-antitifongal ngokusebenzisa i-membrane ye-vagin ye-vagina igxothwe kwigazi kwaye inefuthe elibi kwisibindi (nangona kuncinci kunokuba ingeniswa). Ezi zihlandlo ngamanye amaxesha zikhe ziyeke iindawo ezigcobayo kwiindawo zokuhlamba.
Nge candida intertrigo, amaninzi amaninzikazi aqhelekileyo. Ngokukodwa kwixesha elibandayo, xa ufanele ugqoke iimpahla ezifudumeleyo, kunye nangempilo. Ikhumba kwiifumba ziyakhupha, zixubha ngaphezu kwexesha eliqhelekileyo, kwaye iifungus eyaziwayo zihlala kwicala elibi. Eyona nto ikhuselekileyo ngexesha elifanayo yiindawo ezincinci, iindawo eziphantsi kwebele kunye nexesha phakathi kweminwe. I-Skin blushes, njengokungathi iyatshisa, ikhubekile, itychy. Musa ukuzisa kule nto! Ekuqaleni kweengxaki, kabini ngosuku, phatha iindawo ezinengxaki ngekhilimu e-antifungal, ukhonkco lwe-zinc okanye isisombululo, uze usebenzise i powder.
"Musa ukugqoka iimpahla zelineni kunye nezenziweyo. Khetha izinto ezivela kwikoton kunye nelinen, ezithatha kakuhle umswakama kwaye uvumele isikhumba siphefumle. Kwi-infection fungal phantsi kweethambo zendalo, kunethuba elincinane lokuphindaphinda.
"Ngaphambi kokuba ubeke into entsha, ngokukodwa umbala, kufuneka uhlambe. Le nkqubo iya kunciphisa izicubu, zisuse idayi kunye neekhemikhali ezinokubangela ukucaphuka kwesikhumba.
"Gqoka ii-leggings ezinqamlekileyo okanye iibhasikidi ezenziwe ngejeyiti yekotyi kunye neyongezelelo encinci ye-lycra (akukho ngaphezu kwe-3%). Ngoncedo lwabo, ukungqubuzana kweendawo zokudibanisa zomzimba ngexesha lokuhamba, ukuqhuba kwaye ngexesha loqeqesho luyehla. Ukuba ukuzaliswa ngokugqithiseleyo, bhinqa iindawo zokuxubha zamathanga ukuya emadolweni nge-bandage elastic, kodwa ungayidluli.
"Thatha imizuzu engama-15-20 nganye ngosuku lokuhlamba kunye ne-baking soda (iipunipoli eziliqela kumlinganiselo oqhelekileyo) okanye i-viniga ye-6% yeetafile (ilitha nganye kwibhedi), ukususa ukutshiza kunye nokuvuvukala, kwakunye nokunyuka kwamagqabi okunciphisa ukujuluka nokucaphukisa isikhumba.
"Hlanza iindawo ezinengxaki kunye nabasemagqabini abachasayo kunye ne-aloe kunye nezinye izitshalo ezithintelayo.
Ukuba amanzi yinto engokwemvelo yezandla zakho, yazi: i-thrush ayilali! Ukuthuthwa kunokunciphisa ulusu kwaye luyenze lufikeleleke ngakumbi kwi-infection fungal. Isiphumo sinokudakalisa - i-candidiasis yama-grooves perioves. Ulusu olujikelezayo luvuvukile, lubomvu, lukhulu kakhulu. Ukuvuvukala kudla ngokuphonswa kwiisilumkiso: ziba zincinci, zincinci, ziba mnyama kwaye zihluthe.
"Sebenzisa iiglavu zerabha, kwaye emva kokudibanisa ixesha elide ngamanzi, ungalibali ukugcoba izandla zakho nge-cream e-antitifungal.
Ingaba isikhumba somile? Ngaba abafuni ukuphilisa iintlungu ezibuhlungu? Oku kwenzeka nge-mycosis. Gcinani engqondweni: ama-mushroom eyona ntoyike kakhulu iyingozi ye-asidi! Zama ukuxubha i-rhubarb ibonakala kwi-gruel, amajikijolo e-black currant, i-plums okanye i-apula okanye i-greasing izandla. Emva kweentsuku ezi-4-5, ulusu luya kuba lutsha!
I-Zaeda (idiza emacaleni omlomo) yenye isono ses candida. Zama ukukhumbula, emva koko babonakala. Ngaba uthathe i antibiotics? Okanye uye watyelela i-reception kunye nodokotela wamazinyo owabethelela ikona yomlomo wakhe kunye nezixhobo? Okanye mhlawumbi ugqoke i-bracket system? Impendulo ayibalulekanga kakhulu, into ephambili kukuthintela ukusuleleka kwintsholongwane kuze kube yilapho isasazeka kwi-membrane yomlomo kwaye ingangeni emqaleni.
»Thabatha phezu kwebheyibhile ye-isatin okanye i-levorin, engeza i-pinch ye-soda kunye namanzi amancinci abilisiwe ukuze wenze unobumba obunzima. Faka isicelo kwindawo ebuhlungu 3-4 amaxesha ngosuku.
"Sebenzisa i-ortatin okanye i-levorin amafutha. Ngeveki kamva uya kulibala malunga nodliwano-ndlebe!
Ngokuqhelekileyo zivela kwiintsana. Nangona kunjalo, ngamanye amaxesha i-thrush iya emlonyeni womntu omdala. Njengomthetho, oku kwenzeka ngexesha lokunciphisa ukukhusela komzimba emva kwesifo okanye ukungenakulawulwa kokungavunyelwa kwee-antibiotics. Ungaze ufune ukuzikhethela wena, ngaphandle kokubonisana nodokotela! I-Candida ayinakuyiphumelela ukuyisebenzisa ngokunxulumene nokulinganisela okuphazamisayo phakathi kwabemi be-microscopic yomlomo womlomo!
Ukongeza kwiifilimu ezimhlophe esibhakabhakeni, izigama kunye nolwimi, i-thrush ingabangela ukutshabalala okungapheliyo kwindonga ye-pharyngitis (i-pharyngitis), i-toni (angina), ukungena ezindlebeni, kubangele i-otitis. Kwimeko enjalo ugqirha uya kuwufumana! Akuvunyelwanga ngokupheleleyo ukunyanga: ngaphandle kokuba yingcali, kulula ukuphosakela kwaye uvumele amakhowe ukuba ahlaziye aphucule amatsha amabhuloho emzimbeni, angene kwizitho zangaphakathi. Awukwazi ukuvumela oku!
Ufuna ukususa iifilimu ezimhlophe kwizinsini, isibhakabhaka kunye nolwimi kunye nekotton swabs ezixutywe kwisisombululo soda (0.5 ithisipuni nganye indebe yamanzi abilisiwe), i-borax kwi-glycerin (ithengiswe kwi-pharmacy) okanye i-10% ye-tincture ye-poplar buds (25- I-30 iyancipha kwiglasi yamanzi abilayo). Le ngxube efanayo isusa umqala wakho.
"Sebenzisa i-decoction ye-oak bark, ukuxutywa kwe-nettle (indlela yokulungiselela iboniswe kwiphakheji) okanye isisombululo esibuthakathaka se-hydrogen peroxide (isipuni kwisiglasi samanzi abilisiwe).
"Ukunciphisa iibhokhwe ezinamazinyo ezinzima, ukulimaza iinsini, ubuso beentama kunye nolwimi. Ukushicilela utshintshi zonke iinyanga ezintathu.
"Ngcono uphefumle impumlo yakho! Xa uphefumula ngomlomo, umlenze womlenze womlomo umile. Ilahlekelwa amandla okulwa nokusuleleka kwefungal. I-lipstick ne-nicotine inomgangatho ophantsi kunye neyicotine.
Nangona kubonakala ngathi "ukunyaniseka" kwe-thrush - izizathu, iimpawu, unyango alulula kunezinye izifo. I-Thrush ayikwazi ukunyanzelwa - oku kungakhuselekanga kwaye ingaba yintlekele ngokwenene. Akunakwenzeka ukuba oku kukufunayo. Ngaba akunjalo ...?
Umjikelezo wesisu: kuxhomekeka kwiimeko ezahlukeneyo
Izifo zamalungu omzimba wesini
UKonstantin Meladze ubeke ingxelo malunga nokuhamba kweVladislav Ramm kwi-MBAND
Imifanekiso emihle nehlekisayo ngoMhla kaTitshala 2017
Isaladi kunye noshizi neebhokhwe
Ukupheka i-pilova, ongazange uyayizi (9 zokupheka pilova)
Indlela yokulungiselela ukukhulelwa?
Iimpawu zokwehliswa kwesifo kwi-scoliosis
Kuthekani ukuba uthando luye lwadlula?
Ukungabi ngesondo emshadweni, izizathu
Ilya Lagutenko, iimpawu zothando
Fries zaseFrance ekhaya
Iingxaki zophuhliso ngexesha lokukhula komntwana